Golaha Wasiirada DF oo meel mariyay go'aan uu BF Soomaaliya ka sugayay - Caasimada Online
Home Warar Golaha Wasiirada DF oo meel mariyay go’aan uu BF Soomaaliya ka sugayay
Golaha Wasiirada DF oo meel mariyay go’aan uu BF Soomaaliya ka sugayay
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiiradda xukuumadda Soomaaliya, ayaa maanta oo Isniin ah waxa ay meel mariyeen miisaaniyad sannadeedka 2014 ilaa 2015-ka.
Kulanka lagu ansixinayay miisaaniyadda waxaa guddoominayay ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed.
Markii uu soo dhammaaday kulanka waxaa saxaafadda la la hadlay ra’iisal wasaare ku xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda Ridwaan Xirsi.
Dhanka kale golaha Wasiirada ee xukuumada Federaalka ayaa cambaareyn u jeediyay falkii lagu laayay odayaasha dhaqanka ee lagu dilay nawaaxiga Buur-hakaba ee gobolka Bay, waxayna tacsi u direen qoysaska, qaraabada iyo shacabka Soomaaliyeed ee ay ka baxeen odayaashaasi.
Go’aanka ay maanta ku meel mariyeen golaha wasiirada Soomaaliya, miisaaniyad saneedka ayaa waxa ay timid markii guddoomiyaha baarlamaanka uu maalin ka hor ka sheegay furitaanka kal fadhiggii 4-aad ee golaha baarlamaanka in iyadoo la horkeenin baarlamaanka miisaaniyad sanadeedka lagu saqeenaayo sannadkan in wax lacag aaney laga bixin karin bangiga dowladda.